ဘယ်ကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံး iPhone ကိုမိသားစုစီမံကိန်းရှိပါသလား
IPhone & iPod Key ကို Concepts
by ဆမ် Costello
Last Updated: ဇူလိုင် 20, 2015
ကုမ္ပဏီ iPhone ကိုအသုံးပြုသူများအများအတွက်အကောင်းဆုံးမိသားစုအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းရာဖုန်းကိုထုတ်ရှာဖွေတကယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ တစ်မိသားစုလည်းသူတို့ကိုအရှိဆုံးပေးခြင်းနေချိန်မှာကုမ္ပဏီသူတို့ကိုအနည်းဆုံးအခကြေးငွေကောက်ခံမည့်ဖုန်းကိုထုတ်တွက်ဆသည်အမှန်ပင်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်ကိုဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာ, ဤမျှလောက်များစွာသောအခြေအနေတွေနှင့်အထူးအပေးအယူနှင့်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်ရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကြောင်းပြုပါကကူညီရန်ကြိုးစားသည်။
စီကုမ္ပဏီ၏ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှိုင်းယှဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ဇယားထုတ်စစ်ဆေးမီ, က iPhone အတွက်မိသားစုအစီအစဉ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ နှုန်းမှာတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်အစီအစဉ်များ-, မိသားစုများနှင့်ချထားပေးမိနစ်တောင်းဆို၏နံပါတ်တစ်ဝှမ်းအခြေစိုက်ခံရဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ-အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများန့်အသတ်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်စာသားပါဝင်သည်နှင့်အတူတစ်မိသားစုအပေါ် devices များအကြားမျှဝေအချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုအဓိကကုန်ကျစရိတ်စီစဉ်အောင်ပြောင်းလဲပြီနေစဉ် အားလုံးအစီအစဉ်များသည်။
အစီအစဉ်တစ်ခုကောက်နေသည့်အခါဒါ, သင်တို့သည်နောက်တဖန်သင်တို့ကိုပြောနေတာဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်အချိန်စိုးရိမ်ချင်; အစား, သင်ကမိသားစုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ပါမယ်ဘယ်လောက် data ကိုစဉ်းစားပါ။ ဘယ်နှစ်ယောက် apps များနှင့်သီချင်းများသငျသညျဓါတ်ပုံနှင့်စာသားရုပ်ပုံများကိုအပ်လုတ်, သင်တို့စီးဆင်းချင်ပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုနှင့်ဂီတကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အစီအစဉ်၏အဓိကကုန်ကျစရိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး iPhone သစ် (သင်အပြည့်အဝလက်လီစျေးနှုန်းတစ်ခု unsubsidized ဖုန်းကိုဝယ်လို့မဟုတ်လျှင်) တစ်ဦးတည်းအချိန် activation အခကြေးငွေနှင့်လိုအပ်နှစ်နှစ်စာချုပ်ရှိသည်။
RELATED: iPhone ကိုမော်ဒယ်သင်တို့အဘို့အမှန်သည်ဘယ်?
ဤရွေ့ကားစျေးနှုန်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်အထက်နောက်ဆုံး update လုပ်သည့်ရက်စွဲ၏အဖြစ်တိကျမှန်ကန်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖုန်းကိုကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အထူးအပေးအယူရှိပုံကိုမကြာခဏပေးထား, သင်ကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ကသူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များထုတ်စစ်ဆေးချင်ပါလိမ့်မယ်။
AT & T က Sprint T-Mobile က Verizon က
1 GB အထိ $ 65 $ 20 n /an / a
2 GB ကို n /a$ 25 $ 80 $ 60
3 GB အထိ $ 80 n /an /a$ 70
4 ဂီဂါဘိုက် n /a$ 40 $ 90 $ 70
6 GB ကို $ 110 n /a$ 100 ဦး $ 80
8 GB ကို n /a$ 70 $ 110 $ 90
10 GB အထိ $ 140 n /an /a$ 100 ဦး
12 GB အထိ n /a$ 90 $ 120 $ 110
14 GB အထိ n /an /an /a$ 120
15 GB အထိ $ 170 n /an /an / a
16 ဂီဂါဘိုက် n /an /an /a$ 130
18 GB အထိ n /an /an /a$ 140
20 GB အထိ $ 190 $ 100 ဦး n /a$ 150
32 GB အထိ n /a$ 130 n /a$ 150
40 GB အထိ n /a$ 150 n /a$ 150
60 GB အထိ n /a$ 225 n /a$ 150
Unlimited n /an /a$ 140 n / a
ဖုန်းအတွက်အကြား 10 မှတက် 10 မှတက်6အထိ 10 မှတက်
Overages - 1 GB အထိ $ 15 $ 0,15 / MB အထိ n /a$ 15
စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ဖို့ဒေတာ ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ
ချိတ်တွဲ / ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
ပါဝင်သည် ပါဝင်သည် 3-7 GB ကို / လိုင်း
Unlimited ပါဝင်သည် ပါဝင်သည် ပါဝင်သည် ပါဝင်သည်
Wi-Fi ကိုခေါ် ဆို.
n /aဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ n / a
$ 15 $ 25 n /a$ 40
စက်ကိုတစ်ဦးလျှင် $ 325 $ 350 $ 200 $ 350
4 အိုင်ဖုန်း + များအတွက်စျေးနှုန်း
Unlimited Voice ကို +
Unlimited ကျမ်းစာ +
10 သို့မဟုတ် 12 GB ကိုဒေတာများ
(အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ခမတိုင်မီ) $ 260 $ 150 $ 120 $ 260
IPhone နှင့် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်လေယာဉ်ပျံ Mode ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
IOS က 9: အဆိုပါအခြေခံ
ငါ iPhone အတွက်လျှပ်တပြက် Get နိုင်သလား?
အားလုံး Cydia ကိုအကြောင်း
သင်ဟာ iPhone ပေါ်မှာ AirPrint အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
တစ်ခုက iPhone ဗိုင်းရပ်စ် Get ဖို့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
အဘယ်မှာရှိ 64-Bit Windows အတွက် iTunes ကို Download လုပ်ဖို့သင်ယူပါ
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် Jailbreak ၏အဓိပ္ပာယ်
သင်ဟာ iPhone 3GS သို့မဟုတ် iPhone ကို 3G အပေါ် FaceTime အသုံးပြုပါနိုင်သလား?
Foursquare ရဲ့ swarm App ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အခမဲ့ Easy Drive ကိုစစ်ဆေးမှု v1.1
Outlook နဲ့အတွင်းအီးမေးလ် Print လုပ်နည်း
Cardio သင်တန်းပေး Pro ကို
ကိုယ့်အကြောင်းအားလုံး Google က April Fool နေ့ဟာသနှင့်နောက်ပြောင်မှုများ
အီးမေးလ်ကနေ IncrediMail ကြော်ငြာ Banner Remove လုပ်နည်း
စျေးအကြီးဆုံး iPhone နှင့် iPad Apps ကပ၏ 10 iTunes ကိုတွင်
HDMI Switcher - သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
Laptop PC ကိုဝယ်သူလမ်းညွှန်
အလိုအလျောက် Google ကပြက္ခဒိန်မှမွေးနေ့များထည့်သွင်းနည်း
အင်တာနက်ကို & ကွန်ယက်
Photoshop ကို CS2 အတွက်သီးနှံ Tool ကို
သင့်ရဲ့ရှေးအကျဆုံး Gmail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများလျင်မြန်စွာရှာမည်
Windows7ကိုခုနှစ်တွင်ခြောက်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ
Yahoo! Filter လုပ်နည်း Mac OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာမေးလ်ပမ်
အဆိုပါ hosts file ကာကွယ်ခြင်း